Ravorona iry ô, handeha ho aiza izato ianao ?
Mivikavika vao maraina, toa maika izato izy.
Ny fikopakin'ny elatrao, toa mira angorodao ;
Milamindamina aok'izany, tsy iaran'ny kirizy.
Ravorona iry ô, mba ho hafarako ange ianao !
Hitondra hafatra kely, hampitaina any ho any.
Ho zarazaraina eny an-dàlana, asa ny hevitrao ?
Fa mety mahasoa ny mponina eto an-tany.
Ravorona iry ô, izao ilay hafatra hampitaina :
Dia ny mba hifankatiavan'ny olon-drehetra ;
Mba tsy hifamono, fa lahatokana anie ny aina !
Ka tokony ho kajiana amin'ny fotoana rehetra.
Ravorona iry ô, mba hampitao any koa re,
Ny hitandroana mandrakariva ny fahamarinana,
Toy ny anakandriamaso hoy ny teny fandre ;
Ka hiezahan'ny rehetra tsy hanao dika vilana.
Ravorona iry ô, mba lazalazao any ny fifanajana,
Eo amin'ny olon-rehetra mety ho lehibe na kely ;
Taratry ny toetra tsara, an-trano na ankalamanjana.
Indrindra ny fanoavana ireo ray aman-dreny.
Ravorona iry ô, tsy hadino ny fahazotoana miasa ;
Mba tena hisian'ny fivoarana eo amin'ny Firenena.
Ary mba ho tanteraka daholo ny zavatra kinasa.
Amin'izay angamba vao tena hisy ny fahaleovantena.
Ravorona iry ô, ny hafatra farany sao dia hadino,
Dia ny mivavaka mafy amin'Andriamanitra Ray ;
Miasa foana mantsy, anefa mety hioty tadio
Raha tsy ambinin'i Tompo, ka eo vao angaihay.
18 Aprily 2019
Sokajy : Eritreritra mandalo, fananarana, fiainana, Fiaraha-monina, Tanindrazana, Tontolo iainana
Date de dernière mise à jour : Jeu 10 oct 2019